Ogaden News Agency (ONA) – Khilaafkii Kooxda Wayaanaha U Dhexeeyay oo Wali Siisocda.
Khilaafkii Kooxda Wayaanaha U Dhexeeyay oo Wali Siisocda.
Waxaa ONA soo gaadhay warbixin kusaabsan in Berhane Gebrekiristos oo jagooyin badan kasoo qabtay taliska Itoobiya uu xilkiisii ugu dambeeyay waayay.
Berhane ayaa wuxuu ku magacawnaa Wasiiru Dawlaha Arimaha Dibbada ee Itoobiya. Waxaa laga qaaday xilkan isagoo lagu badalay nin layidhaahdo Taye Atsekeselassie. Berhane ayaa horaan usoo waayay dhawr xil oo uu kumagacawnaa sida Xubinimadii Gudiga Fulinta & Golaha Dhexe ee Jabhada TPLF.
Warbixintan ayaa intaas kudaraysa in Berhane Gebrekiristos ayaa gabi ahaanba ka dhex baxay siyaasadii Gumaysiga Itoobiya. Arintan ayaa waxay salka kuhaysaa khilaafkii u dhexeeyay kooxda TPLF oo gaadhay meeshii ugu saraysay. Tan iyo intii khilaafkan soo shaac baxay wuxuu saameeyay masuuliin badan oo magac & miisaan ku dhex lahaa taliska Gumaysiga dhexdiisa sida Berhane Gebrekiristos.
Dadka Arimaha Gumaysiga falan qeeya ayaa talaabadan ugu dambaysay ee xilka lagaga xayuubiyay Berhane Gebrekiristos ku fasiray inuu hardansiyaasadeed oo hoose kasocdo Gumaysiga dhexdiisa. Waxaa xusid mudan in Berhane uu ahaa ninkii la aaminsanaa inuu Kaligii Taliyihii Bakhtiyay
Malez Zinawi uu badali doono, maanta layidhi caruurtaada u xiiro.
Waxa kale oo intaas dheer in kal fadhigii ururka TOLF la qabatay 2 jeer in ka yar mudo 2 bilood ah halkaas oo ilaa & hadda la isku mari la’yahay awood qaybsiga ururka TPLF ka dhex taagan.